Wasaaradda waxbarashada Puntland oo maanta kormeero ku sameysay dugsiyada waxbarasho ee ku yaala Garowe. – Radio Daljir
Wasaaradda waxbarashada Puntland oo maanta kormeero ku sameysay dugsiyada waxbarasho ee ku yaala Garowe.
Oktoobar 2, 2012 4:16 b 0
Garowe, Oct, 02 – Mas?uuliyiin uu horkacayay wasiirka waxbarashada Puntland C/ Faarax Siciid ?Juxa? ayaa maantay kormeero waxay ku gaareen dugsiyada sare ee ku yaala Garowe, si ay ula socdaan heerarka waxbarasho ee dugsiyadaasi.
Xubnaha wasiirka waxbarashada Puntland waxa ay kormeerkooda waxbarasho ka bilaabeen dugsiga sare ee Gambool Garowe, Waxaana halkaasi ay kula kulmeen maamulka dugsiga iyo qaar kamid ah ardayda oo xiligaasi ku jiray daruusta casharadda.
Wasiirka waxbarashada Puntland C/Faarax Siciid ?Juxa? wuxuu ardayda usheegay in wasaaradda waxbarashadu bilaabayso kormeero adag oo lagu sameynayo ardayda dhigita fasalada sare si loo ogaado tayada ardayda kabaxa dugsiyada Puntland, Waxaana sidoo kale uu sheegay in tilaabadaan ay kamid tahay dadaalada kor loogu qaadayo waxbarashada Puntland
Sidoo kale,? wafdigu waxaa kale oo ay siyaarteen maantay dugsiga sare ee Al-waaxa Garowe oo kamid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Garowe , waxaana halkaasi ay kula kulmeen mamaulka iyo macalimiinta dugsigaasi.
Wasiirka waxbarashada Puntland waxaa ardayda Al-Waaxa uu usheegay in ay wasaaradda waxbarashadu wado kormeer guud oolagu qiimeynayo dugsiyada sare ee Puntland, Waxaana ardayda uu ka codsaday a in ay ka feejignaadaan dhaqanka ardaydu kaga boodaan fasaladooda,
Wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa dhawaanahaan waday dabagal lagu sameynayo ardayda dhigita dugsiyada sare ee Puntland, Iyadoo wasaaraddu arinkaan ku sababaysay tayaynta waxbarasho ee Puntland, Waxaa arintaan ay kusoo beegmaysaa, Xilli dhawaaan wasaaraddu ay deeq waxbarasho uheshay 60 arday oo loo diray dalka Itoobiya.
Madaxweynaha Puntland oo Madaxtooyada ku qaabilay wafti ka socda Turkiga (Sawiro)